Vakok Member Name:
World of WarCraft (3.3.5a) - Set Realmlist pandora.vakok.net
24/7 Customer Service Phone No. 09 964 522 945 Email - htetnyne@vakok.net, minkaungthant@vakok.net, -----------------------------------------
Character များ၊ Guild များ၊ Achievement များ ၊ Arena Team rating များ၊အစရှိသဖြင့် Vakok Player တို့ ၏ Information များကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှု့ ရန် http://vakok.net/armory ------------------------------------------------------------------------------ Vakok Member တို့ ၏ Item Trade log များအားလုံးကို ကြည့်ရှု့ ရန် - http://vakok.net/character_items/alltradelog ------------------------------------------------------------------------------
Online Item Trade ပြုလုပ်ရန် - http://vakok.net/character_items ------------------------------------------------------------------------------- GEM, Wrathful, Mount အစရှိသဖြင့် Ingame item များ ၀ယ်ယူရန် - http://vakok.net/store ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Member တို့Account ထဲမှ Character များကို တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့လက်ဆောင်ပေးရန် http://vakok.net/character_transfer ------------------------------------------------------------------------------- ဘောလုံးပွဲ ကံစမ်းရန် - http://vakok.net/games/playsoccer ------------------------------------------------------------------------------- နာမည်ပြောင်း ၊ Alliance / Horde ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် - http://vakok.net/character_tools -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vk Point များ တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့လက်ဆောင်ပေး၇န် - http://vakok.net/pointtransfer -------------------------------------------------------------------------------------------- Vakok Payment Card or VkPoint ၀ယ်ယူရန် - http://vakok.net/forum/index.php?topic=239.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posted by htetnyne on 2015/02/22
Story of Blacksmith and Titans Vakok ခေတ် Azeroth ကမ္ဘာကြီးရှိ Pandora ရွာကလေးတွင် ပန်းပဲဆရာတစ်ဦး ရှိလေသည်။ သူ၏လက်ရာများမှာ အလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်လှသည့်အတွက် တစ်နေ့မှာ Azeroth ဂြိုလ်စောင့် Titan များက လက်နက်များပြုလုပ်ရန် Azeroth အမြုတေ သတ္ထုကြမ်းများဖြင့် လာရောက်အပ်နှံခဲ့ပါတော့တယ်။ ထိုပန်းပဲဆရာရဲ့ နေ့မနား၊ ညမနား ကြိုးပမ်းချက်ကြောင့် Titanic လက်နက် နှင့် ဒိုင်းကာများ စုစုပေါင်း ၁၄ ခုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြုလုပ်အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ထိုလက်နက်များမှာ အလွန်ပင်ထူးခြားလွန်းလှတဲ့အတွက် Titan များက သဘောကျနှစ်ခြိုက်လွန်းလှပါတယ်။ ထိုလက်နက်များကို သွန်းလုပ်ရာမှ ပိုတဲ့ Essence of Azeroth သတ္ထုများဖြင့် ပုံစံတူ လက်နက်များကို ထပ်မံသွန်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုလက်နက်များမှာ အစွမ်းအလွန်ထက်တာကြောင့် အချိန်ခဏလေးတွင်မှာပင် Lich King မှရိပ်မိသွားပါတော့တယ်။ ပန်းပဲဆရာမရှိခိုက်မှာ Pandora ရွာလေးကို ချီတက်ပြီး ပန်းပဲဖိုကိုသိမ်းပိုက်ကာ လက်နက် ၁၄ မျိုးကို လုယူသွားပါတော့တယ်။ Titan များမှာ အလွန်စိတ်ဆိုးပြီး ပန်းပဲဆရာကို ထာဝရအကျဉ်းချကာ Lich King နှင့်အပေါင်းအပါများထံမှ ပျောက်ဆုံးသွားသော Titanic Weapon များကို ပြန်လည်ရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းပါတယ်။ Titan များ၏ စုံစမ်းချက်အရ Lich King မှ Halion နဂါးနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာ လက်ဆောင်ပဏာအဖြစ် Titanic Weapon များမှ ၂ ခုကို ပေးအပ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Lich King ၏ အန္တိမ အကာအကွယ်ကြောင့် Titan များ Icecrown Citadel နှင့် Ruby Sanctum သို့ ချည်းကပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်နောက် Scourge များလက်ထဲရောက်နေသည်ထက်စာရင် သာမန်လူတစ်ဦးထံရောက်နေသည်က ပိုကောင်းသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ကြေငြာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတော့သည်။ Scourge မဟုတ်သော မည်သူမဆို ထို လက်နက်များကို Scourge Undead များထံမှ ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ပါက ထိုလက်နက်များ၏ ပိုင်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ Titanic Weapon များနှင့် ပါတ်သက်၍ Weapon name နှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော Scourge Boss များအား အောက်ပါအတိုင်းသဲလွန်စများကို လူသားအားလုံးထံ အသိပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။1. Vijaya's Bow (Lord Marrowgarr) – 286 bow2. Elder Wand (Lady Deathwhisper) – 286 wand3. Silent Witchblade (Professor) – 286 Dagger4. Mystic Polearm (Professor ) – 286 Polearm5. Kongo's Staff (Sindragosa) – 286 Staff6. Sword of Gryffindor (Sindragosa) – 286 One-hand Sword7. Sharur (Bloodqueen) – 286 Two-hand Mace8. Caledfwlch (Bloodqueen) – 286 Spell power Sword9. Mjolnir Hammer (The Lich King) -286 Spellpower Mace10. Parashu (The Lich King) -286 Two-hand Axe11. Axe of Perun (Halion) – 286 One-hand Axe12. Naegling (Halion) – 286 Two-hand Sword13. Priwen (Festergut) – 286 Defense Shield14. Svalinn (Rotface) – 286 Intel Shield။ ။ 286 Weapon များကို ? အနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ ပုံအမှန်အတိုင်းမြင်ရရန် Vakok Patch File ကို Download ဆွဲထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Install လုပ်ပုံ အဆင့်အဆင့် -
Step 1 => Close Wow.exe (if you have it open)Step2=> Download http://vakok.net/downloads/pandora-patch.zip (very small file)Step3=> unzip pandora-patch.zip (a new file will appear patch-7.MPQ)Step3=> go to "WoW Client" FolderStep4=> go into "Data" FolderStep5=> copy patch-7.MPQ into "Data" FolderStep6=> Delete all files under "Cache" FolderStep7=> Enjoy the beauties of Vakok new Items 286P.S ။ ။ Item များမှာ 25 Men Heroic Mode တွင်သာ ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by vkJ2K on 2014/10/04
August Vakok Photo Contest Award
Vakok Online Games မှ Player များအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ Event များ ကျင်းပပေးလျှက်ရှိရာ August လအတွက် Best Photo Contest ကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။
Player များရဲ့ like, GM vote, Admin Vote, Technician Vote များဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ WOW နှင့် AION အတွက် လူကြိုက်အများဆုံး Photo များထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ Best Photo Contest Award for World of Warcraft -
Character Name - Spartacusmm
Best Photo Contest Award for AION -
Character Name - Kale
ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသွားသော Spartacusmm နှင့် Kale တို့ကို Reward အနေဖြင့် Vkpoint 15000 ချီးမြှင့်ပြီး Vakok.net တွင် အမှတ်တရ ထားရှိ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည့် နောက် လာမယ့်လာမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ Vakok Event များကိုလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Play More @Vakok!
Posted by vkJ2K on 2014/09/03
A Unique Game History Of Vakok Online Games
Posted by vkJ2K on 2014/07/15